Mozenda bụ ngwá ọrụ dị irè maka ndị na-achọ iwepụta data site na weebụsaịtị dị iche iche n'ụzọ dị ngwa. N'ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe, ihe ngwanrọ data a na-enye nnukwu nhọrọ iji mee ka ọrụ ndị nyocha na ndị na-eme mkpebi mee ka ọrụ dị mfe. Ọ na-enye onye ọrụ enyi na enyi nke na-enye ohere ndị ọrụ na-anakọta ọtụtụ data site na isi mmalite dị iche iche, dịka ndepụta ọnụahịa, akụkọ akụkọ, nyocha, ozi kọntaktị na ọtụtụ ndị ọzọ. E wezụga nke ahụ, ha nwere ike ịmepụta data ha niile na faịlụ ụfọdụ iji mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma maka azụmahịa ha.
Uru nke Iji Mozenda Software
Ọ bụ usoro ngwanrọ dị mfe, ebe ndị ọrụ nwere ike icho ma chekwaa data na kọmputa ha - wohnung suchen in zürich. Enwere otutu otutu ngwa, karia maka ndi ahia na ndi ahia. Ọ na-enye ha nnukwu nhọrọ; ha nwere ike ime ihe ndị dị ka ịnweta ozi maka ịmepụta mmefu ego, ego nlele, ịkọ ma tụlee ahịa nke ngwaahịa.
Webscrapers nwere ohere ịnakọta ọtụtụ ihe ọmụma dịka ha chọrọ n'oge na oge na weebụsaịtị dị iche iche. Mozenda na-eji teknụzụ igwe ojii nye ndị ọrụ ya ohere ụfọdụ dị ịtụnanya. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-enye ha ohere ịnweta ohere dị mma, nke dị nchebe ma dị irè na iji ihe ndị dị ịtụnanya iji nyere ha aka ịrụzu ọrụ ha nke ọma..Ha nwekwara ike iji ihe niile nchịkọta data sitere na weebụsaịtị iji wepụta ha na ụdị ọdụ data dị iche iche iji tụlee ha n'ụzọ ka mma. N'ihi ya, ndị na-ere ahịa ahịa na ndị ahịa nwere ike ịkwalite ọrụ nke azụmahịa ha ma nwee ihe ịga nke ọma karịa ndị na-asọmpi ha.
Ndị ọrụ adịghị mkpa ka ị nwee nkà mmemme pụrụ iche iji jiri mmemme nchịkọta data a. N'ihi ya, ndị ọrụ na-achọ ịchọta ezi data weebụ nwere ike iji software a n'enweghị ihe gbasara ndị ọzọ na usoro ahụ. Ha nwere ike ịrụ ọrụ site na onwe ha n'ụzọ dị mfe n'ejighị ego buru ibu iji kwụọ onye mmemme. Dị ka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịmepụta ụdị data dị iche iche wee nweta ihe ha choro ngwa ngwa o kwere mee iji mezuo ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ ha. Karịsịa, ha nwere ike iji ụdị ụfọdụ, dịka XML, iji nweta ozi niile dị mkpa.
Mozenda na-enye scrapers web otu ọkachamara nkwado maka ijide n'aka na ndị ọrụ ya nwere ike ibudata ozi niile ha chọrọ iji mee nke ọma. Ọzọkwa, ngwa ngwa software a na-esetịpụrụ ndị ọkachamara ọrụ nnyefe pụrụ iche iji nyere ha aka mezue ọrụ ha na nke ọma. Ha nwekwara ike inyocha ọrụ ndị ahụ na ndị ọrụ iji nyere ha aka ime ndokwa niile dị mkpa. Ndị ọrụ nwekwara ike inweta ekwentị ma ọ bụ nkwado email ma ha nwekwara ike ịnweta ohere, blog, nkwado email na vidiyo ọzụzụ. Ndị ọkachamara Mozenda dị njikere mgbe niile iji wuo ma rụọ ọrụ nke ndị ọrụ ya iji nyere ha aka ịchekwa oge.
Site n'iji Mozenda, ndị nyocha weebụ nwere ike ịmepụta ndepụta ndị bara uru. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịmepụta usoro data siri ike. Ha ga-pịa nanị iji matapụta aha na ụkpụrụ pụrụ iche na mgbe ahụ, ha nwere ike ịchekwa data ha na ejiri aha aha ọ bụla na mpaghara dị iche.
Mgbe ndị ọrụ na-achọ ịchọta ngwanrọ kachasị mma iji nweta data, Mozenda bụ nhọrọ kacha mma. Ọ dị mfe, ngwa ngwa ma ọ nwere ike tinye ya site na ụlọ ọrụ ndị na-achọ iji merie ndị na-asọmpi ma na-ewuli ha arụmọrụ.